သိပြီးကြပြီလား? ဟော့ပေါ့ကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့အဝကျုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် အသစ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာ…. 5284 views
သိပြီးကြပြီလား? ဟော့ပေါ့ကိုဈေးသက်သက်သာသာနဲ့အဝကျုံးနိုင်တဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် အသစ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာ….
ဒီတစ်ခေါက်လည်းဟော့ပေါ့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုင်သစ်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အနော်ရထာလမ်းမပေါ်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်က ‘Chilli Hot Pot’ ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဟော့ပေါ့စားတဲ့အခါ စားနိုင်တဲ့သူမို့ ဘူဖေးအနေနဲ့စားတာဆိုရင်အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားချင်တာ ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ သိပ်မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်စေ မှာသလောက်ပဲစားပြီး၊ ကျသလောက်ပဲရှင်းရတဲ့ပုံစံ လေးကတော့ ဟန်ကျပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဟော့ပေါ့အရည်ရဲ့အရသာနဲ့ သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းယူပုံတွေပါပဲ။ ဟော့ပေ့ါကိုတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်ပဲယူမယ်ဆိုလည်းအေးဆေးပဲ။ အုပ်စုလိုက်ဖွဲ့စားမယ်ဆိုရင်လည်း သိပ်မကျဘူး။ ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်လဲ ?
ဒီဆိုင်လေးကလည်းမှာသလောက်စား၊ ကျသလောက်ရှင်းပဲ။ အဲ့ဒီမှာမှ အခြားနေရာနဲ့မတူ တစ်ခုသွားထူးခြားတာက အသား၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာ၊ အသားလုံး၊ မှို၊ အသီးအရွက် အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမှ 100gm ကို (၁၂၀၀)ယူတာ။ ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်လေ။ တော်တော်လေးတန်တယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီပဲစားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စားနိုင်သလောက်ရွေးထည့်ပြီးချိန်လိုက်။ အဲ့ဒါကိုမှသူတို့ဘာသာပဲချက်ပေးတာ။ ဒါမဲ့ဘယ်လောက်များစားနိုင်မှာလဲနော်။ ထားပါအုံး… တစ်ယောက်ကို အများဆုံး(၅၀၀)ဂရမ်ပဲစားအုံး။ (၆၀၀၀)ကျပ်ပဲကျမှာ။ အဖက်ကြီးပဲငါးရာဂရမ်လည်းမစားနိုင်လောက်ပါဘူး။ အရည်ပါထပ်ပါအုံးမှာဆိုတော့ လေ။ ဒါနဲ့ဒီဆိုင်ကအရည်ဖိုးမယူဘူး။ အခြားဘာမှလည်းထပ်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ အအေးမှာရင်တော့ အအေးဖိုးရှိမယ်ပေါ့။ အအေးကလည်းတန်တယ်နော်။ အသီးဖျော်ရည်တွေတစ်ခွက်ကို (၁၀၀၀)၊ (၁၂၀၀)၊ (၁၅၀၀)ပဲ။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့သောက်ရတာနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတန်တယ်။ သဘာဝအသီးအရသာလေးတွေပါရတယ်။ ကိုယ်သောက်ခဲ့တဲ့ သရက်သီးတော့ကိုယ်တော်တော်လေး ကောင်းတယ်။
အကယ်၍ လူအများနဲ့အုပ်စုလိုက်စားမယ်ဆိုရင်လည်း အကုန်လုံးပေါင်းယူပြီးချိန်လည်းရတာပဲ။ ဒါမဲ့ပိုကောင်းတာက အုပ်စုလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တောင် အကုန်ပေါင်းမစားပဲ ကိုယ်စားနိုင်သလောက်ပဲယူပြီး ကိုယ်ကျသလောက်ပဲရှင်း ဆိုတော့လည်းအချင်းချင်းကျသလောက်ပိုက်ဆံ ပြန်ရှဲရတာတွေဘာတွေလည်းမလိုတော့ဘူးပေ့ါ။ မဟုတ်ရင်အက်မင်တို့ဆိုခဏခဏဖြစ်တယ်။ လေးယောက်လောက်သွားစား၊ ပြီးရင်ကျတာကိုလေးနဲ့စားပြီးတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ပေးဆိုတော့ ဒီမှာတော့ ဒီဇယားလေးတွေငြိမ်းသွားတယ်ပေါ့။ အရသာဆိုရင်လည်းကိုယ်ကြိုက်သလိုစားချင်တယ်ဘာညာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်စာပဲမှာပါလို့အကြံပေးပါရစေ။ (ဟန်နီတို့တော့အကုန်ပေါင်းပြီးယူလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ပန်းကန်လုံးသုံးခုနဲ့တော့ခွဲပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ဟိုလူ့ပန်းကန်ထဲအသားများသွားလို့သွားနှိုက်ရ၊ အရွက်များရလို့ သွားလုရနဲ့ဆိုတော့ တစ်ယောက်ချင်းစားတာတော့ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်)
အသား၊ ငါး၊ ပင်လယ်စာနဲ့အသီးအရွက်တွေကိုတစ်ဈေးထဲယူတယ်ဆိုပေမယ့် အမယ်လည်းမနည်းလှပါဘူး။ ဝက်သားဆိုလည်းအက်မင်တို့တွေ့ခဲ့သလောက်ဆို သုံးထပ်သားလွှာရှိတယ်။ ဝက်အသည်း၊ နှလုံး၊ လျှာ၊ အူမ၊ ခေါင်းသား။ ကြက်ဆိုရင်လည်း အသား၊ အမြစ်၊ နှလုံး၊ တောင်ပံ၊ ခြေထောက်။ ပြီးတော့ ပြည်ကြီးငါး၊ ပုစွန်၊ ကင်းမွန်၊ အမဲသားဆိုရင်လည်းအမဲသားလုံးကောင်းတယ်။ ပြီးတော့အမဲအကြော၊ ပုဆိုးကြမ်းတွေရှိတယ်။ အသားလုံးတွေဆိုရင်လည်း မနည်းလှဘူး။ ငုံဥ၊ ကြာဇံ၊ ခေါက်ဆွဲ အပြင် အသီးအရွက်လည်းအစုံရှိတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ကြိုက်သလောက်ယူ…။ (၁၀၀)ဂရမ်ကိုမှ (၁၂၀၀)။ ဘယ်လိုတောင်တန်မလဲ စဉ်းစားကြည့်လေ :D
ဈေးနှုန်းပြောပြီးတော့ဆိုင်ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုက အရည်။ သူ့ရဲ့အရည်က ပြေပြေလေးပဲသွားတယ်။ မလေးဘူး။ ပေါ့ရွှတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစားရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးဖြစ်နေတာမျိုး။ အရည်အရသာရဲ့ Base ကလည်း မာလာအရသာကိုပဲအဓိကယူထားတာ။ တရုတ်ပြည်ဘက်က လာတယ်ဆိုပေမယ့် ထုံတာတို့၊ စားလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ အရသာကတော့စားကြည့်တာ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေ ဆိုသလိုပေါ့ :P ဟင်းရည်အရောင်ကိုကြည့်လိုက်ထဲက သွားရေယိုချင်စရာကြီး။ အရည်ထဲမှာလည်းနှမ်းဖက်လေးတွေဝဲလို့…။ တစ်ခုလေးပဲ အရည်သောက်မယ်ဆို သေချာလေးမွှေပြီး ဖြေးဖြေးပဲသောက်ပါလို့… သီးတတ်လို့ပါ။ ပူပူနွေးနွေးနဲ့ ငရုတ်သီးလည်းပါတော့လေ…။ အကယ်၍စားနေရင်းနဲ့မှအရည်လိုချင်ရင်လည်း ထပ်ထည့်ပေးပါသေးတယ်။
အစပ်ကသုံးမျိုး။ ဟန်နီတို့တော့ အစပ်ဆုံးစားတယ်ပေါ့။ အစပ်ဆုံးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်။
ဟော့ပေါ့နဲ့တွဲစားဖုိ့ဆော့စ်ကိုတော့တစ်မျိုးထဲထားပေးထားတယ်။ သူတို့စပ်ပြီးသားပဲ။ ငရုတ်သီးလည်းပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူရော… တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်။ အဲ့ဒီဆော့စ်လေးဟော့ပေါ့ထဲထည့်စား။ ပိုတောင်ကောင်းသေး။ အသားဖက်လေးတွေနဲ့တို့စားလည်းအရသာကိုရှိလို့….။ ကိုယ်လိုဆော့စ်ကြိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေစေတာတစ်ခုက ဆော့စ်ထည့်ပေးတဲ့ခွက်ကြီးကအကြီးကြီးရယ်။ အဲ့တော့ခဏခဏထည့်ခိုင်းစရာမလို တော့ဘူးပေါ့…. (ဒါနဲ့ ဟော့ပေါ့စားဖို့ပေးတဲ့ပန်းကန်တွေခွက်တွေ၊ဆော့စ်ထည့်တဲ့ခွက်တွေကို ပေါင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ )
ဆိုင်မှာပရိုမိုးရှင်းတွေကအမြဲလိုလိုပေးထားတယ်တဲ့။ (၆၀၀၀)ဖိုးပြည့်တိုင်း အန်ပေါင်းအိတ်လေးတွေပေးတယ် တဲ့။ အဲ့ဒီအိတ်တွေထဲမှာ ငါးရာ၊ တစ်ထောင်ကစလို့တစ်သောင်းလောက်အထိပါတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုရင် နှစ်သောင်း၊ သုံးသောင်းလောက်အထိတောင်ပါတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ဒါလေးလည်းကံစမ်းကြပါ။ ပျော်စရာလေးပေါ့။
ဆိုင်ကသိပ်တော့မကျယ်ဖူးဗျ။ လူအယောက်သုံးဆယ်လောက်ပဲဆံ့လောက်မယ်ရော…။ ပါဆယ်ဆွဲချင်လည်း ရတယ်။ Door2Door ကနေလည်း Delivery ရတယ်တဲ့။ ဆိုင်အနီးတဝိုက်မြို့နယ်တွေဆိုလည်း Delivery ပို့ပေးတယ်ဆိုလားပဲ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ 09-444555686 ကိုဆက်ကြည့်ပေါ့နော့။ ဆိုင်ကမနက်(၁၀)နာရီခွဲ ကနေ ည(၁၀)နာရီခွဲအထိဖွင့်တယ်။ အနော်ရထာလမ်းမပေါ် (၂၇)လမ်းနဲ့ ကုန်ဈေးတန်းလမ်းကြားမှာရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကွာ စားရတာလည်းအရသာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ လူတိုင်းလိုလို လက်ခံနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက တန်တာ။ ဘတ်ဂျတ်သိပ်ပူစရာမလိုဘူး။ အသားလုံးတွေတော့သိပ်မယူနဲ့၊ စားနိုင်သလောက်ပဲယူပေါ့။ ဘာလို့ဆိုအလုံးတွေကအလေးချိန်ပိုများတာကိုး။ အသားများများစားပေါ့။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တန်ပါတယ်။
ဟော့ပေါ့ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်။ ဘတ်ဂျတ်ချွေတာနေတဲ့သူတွေအတွက်၊ ဟော့ပေါ့ကိုမှ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ၊ နည်းနည်းလေးပဲစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီဆိုင်လေးကိုတွေ့တော့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာ… ကျေးဇူးပါရှင့်
Honey (MyLann )
#MyLann #Online_Restaurant_Directory #Online_Food_Guide #Food_Review_in_Yangon #Foodie_Myanmar #Food_Lover #Food_Crazy #Hot_Pot #Hot_Pot_Lover #Hot_Pot_Crazy #Chilli_Hot_Pot #Hot_Pot_in_Town #Hot_Pot_in_Yangon #Restaurant_in_Yangon #Restaurant_in_Town